Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 1:01 AM Aucun commentaire:
Orimbaton'Isahafa sa Fasan-dRalambosahafa?
Ny lahatsoratra manontolo dia nalaina avy amin'ny ranty Facebook navoakako androany zoma 20 mey 2022 ihany. Hisy ny fanamarihana fa hoavy tsikelikely eo ihany. Toa izao ary ny ranty:
Nilazàna aho hanoratra ireto zavatra manaraka ireto fa efa nandalo tao amin'ny Kaominina ny olona nampanao an'io ka hoe manana taratasin'ny tany.
Voalohany, voamarika ao amin'ny sarintany nentiny (tao amin'ny kaominina) fa fasana io toerana io ary nolazainy fa milevina ao Ralambosahafa, tsy azo andevenam-binanto io fasana io ary tsy misy na iza na iza afaka mikitikitika azy io afa-tsy izy (ilay nandalo tao amin'ny Kaominina) irery ihany.
(Faharoa) Nolazaina ihany koa fa azy koa ny tany andrefan'io toerana (misy kininina) izay noheverina hatramin'izay fa tanim-panjakana io.
Raha nanontaniana hoe aiza izany no misy ilay orimbato nanaovan'ny miaramilan-dRadama fitsitsihana (fianianana) eo amin'ny vavahady atsinanan'Isahafa Atsimo (araka ny fahafantaran'ny maro hatramin'izay) dia hoe tsy fantany sy tsy hitany ny misy an'izany - ary tsy io amin'ny sary io izany...
Fahatelo, tenin'ilay olona nanao ny sokitra tamiko tamin'ny alarobia hoe Sahafa no tena anaran'ity toerana ity fa tsy izany Isahafa izany (tsy fantatro aloha na nolazaina tao amin'ny Kaominina izany nandritra ny resaka tao na tsia) ary avy amin'ny anaran-dRalambosahafa no niavian'ny anaran-toerana.
Manaraka, efa nisy soratra io tsangambato io fa levona ka dia naveriny nosoratana indray. Iza re ny vavolombelona afaka mampahatsiahy an'izay hoe efa nisy soratra izany io?
Fehiny: Miova ny tantara fantatry ny olona teto an-tanàna hatramin'izay.
Fanamarihana: mitodika mianavaratra ny "fafana" fa tsy mitodika mianatsimoandrefana tahaka ny fahita amin'ny fasana rehetra eto Imerina raha tena fasana tokoa ilay izy. Ny sary dia tamin'ny mbola tsy nisy soratra.
Hatreo ny lahatsoratra. Tsy nahatafiditra afa-tsy sary iray aho ka eto no manararaotra mamoaka maromaro! Misy ihany koa ny fanamarihana apetrako: ianareo mpamaky efa mahita fa ataoko sary famantarana ny blaogiko eto ny sarin'ity tsangambato ity, izay no antony voalohany mahatonga ahy nanisy setriny avy hatrany raha vao nitranga ity toe-javatra ity. Avoakako manaraka etoana sary vitsivitsy sy ny mombamomba azy, izaho no naka ny sary rehetra.
Sary nopihana tamin'ny 4 ora 38 minitra tamin'ny andron'ny 3 febroary 2019. Mety ho hitantsika ihany ilay hazo mandondona be eo ambony ankavanana amin'ny sary izay tena eo akaikin'io vatonatsangana io! Hitantsika tsara fa mitodika amin'ny lalana ilay vato. Fanontaniana: manaraka ny firafitra sy ny fitodiky ny fasana fahita eto Imerina ve ilay izy eto?
Sary nopihana tamin'ny 6 ora sy 26 minitra tamin'ny andron'ny 4 febroary 2019. Tokony ho hitantsika avy amin'ireo sary roa navoakako ireo, araka ny aloka hitantsika hoe aiza ny atsinanana ary aiza ny andrefana. Noho izany, tokony ho hitantsika mazava tsara hoe aiza no tokony hisy ny varavaram-pasana. Mahagaga anefa fa tena voabahan'ny tamboho tanteraka izay tokony ho tandrifin'ny varavaram-pasana. Sao dia tsy tokony ho fasana kosa io? Manaraka izany, marihako hatrany fa misy hazo maniry eo ambonin'ny lazaina ho "fasana". Tsy mitovy amin'ny any Eoropa na ny fahita any amin'ny Tandrefana ny fasan'ny eto Imerina na faha-vazimba na faha-andriana. Tsy mihozongozona ve na misy mirodana ny fanambanin'ny toerana raha misy babangoana ao anatiny? Ny lalànan'ny fanorenana fasana ihany koa dia mametraka fa tokony hirefy 2 metatra ny tokotany manodidina azy... Tsy voahaja izany eo amin'ny ilany andrefana (mahatafiditra fiarakely misisika izany 2 metatra izany!)
Ny sary etoana dia tamin'ny mbola tsy nisy soratra. Nilaza ilay olona fa nisy soratra io tamin'ny voalohany fa takona... na levona sa lanin'ny lomotra? Izao no endrika nahitako azy tamin'izaho nahita azy io voalohany indrindra.
Ny sary etoana dia nopihana tamin'ny 1 ora sy 18 minitra tamin'ny alarobia 18 mey 2022. Nanana adiny iray ny mpipai-bato nanoritra io anarana io. Ny taratasy teny an-tanan'ny mpipaika ny vato dia misaraka hoe RALAMBO SAHAFA ny tokony hipetraka teo nefa tsy dia tsikaritra loatra izany.
Nopihana tamin'ny zoma 20 mey 2022 tamin'ny 4 ora sy 37 minitra ny sary etoana. Koa satria tsy mazava tsara ny soratra araka ny hitantsika etsy ambony dia narahana loko izany.
Ny fantatro hatramin'izay kosa dia avy amin'ireto boky ireto. Voalohany ny nosoratan-dRakotondrasoa Antoine, mpitandrina nandalo teto Isahafa, tamin'ny taona 1980. Nosoratany mazava tsara hoe vatolahy telo no teo fa iray sisa no hita eo amin'ny vavahady eto Isahafa Atsimo (1980).
Ny loharanon-torohay faharoa kosa dia nosintonina avy amin'ny bokin-Randriamamonjy Frederic miresaka izany antsoina hoe Orimbato tao (I)Sahafa tamin'ny 15 Adalo 1822 izay raha ampifanandrifiana amin'ny fanisana andro isa lava narahin'ny tao an-dapa dia tamin'ny 06 mey 1822, izany hoe feno 200 taona katroka tamin'ny 06 mey 2022 teo raha arahina indray ny fanisanandro gregoriana.
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 1:05 AM Aucun commentaire:
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 7:17 PM Aucun commentaire:
Nateraky ny 13 mey 1972 aho!
Ary sahiko raisina ho reharehako. Herintaona mahery kely talohan'ny taona 1972 aho no teraka ka fifampitohizan'ny talohan'io vanim-potoana io sy ny taoriany. Taona 1982-1983 no namaliako an-dranomaso voalohany ny raiko satria notereny hianatra teny frantsay kilasy faha-fito any Frantsa aho izay kilasy faha-fito amin'ny sekolim-panjakana eto Madagasikara.
Hoy izy tamiko tamin'izany hoe tsy hahita asa sy ho tafita amin'ny fiainana mihitsy ialahy raha vao tsy mahay teny frantsay. Nitolona tamin'io taona 1972 io anefa izy ary ny 13 mey 1972 mihitsy no tokony hamoahana azy teny Maibahoaka Ivato ho mpiasam-panjakana sy manana ny anjara toerany hiasa hisolo ireo tompon'andraikitra voalohany isa-tanàna maka "congé" any amin'ny faritanin'i Toliary.
Tamin'izany fotoana izany no fanambiko tao anatiko fa tsy voatery mahay teny frantsay vao tafita amin'ny fiainana... fa varavaram-be ihany koa ny teny anglisy sy ny teny malagasy. Fa tsy maintsy novolavolaina amin'ny fianarana ilay teny frantsay aho mandra-pahafeno taona ahy!
Resy lahatra amin'ity resaka (tsindrio eto)ity aho indrindra fa ilay hoe mahay ny ranomasina, ny taniny, ny teniny ary ny tantarany. Ny ranomasina izay niniana noadinoina hatramin'izao fotoana izao! Tsy maintsy manindry ny rohy moa izany satria fandaharana an'olona ilay izy
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 11:55 PM Aucun commentaire:
Fitantarana hafa nahatonga ny anarana Isahafa!
Androany aho vao nahita sy nahare ity fitantarana iray ity. Tsy azo atao mihitsy ny mitsipaka azy noho ny fisian'ny mety ho fahamarinana ao anatiny. Manaraka izany dia efa tsy naharesy lahatra ahy loatra ny filazana voalohany nahatonga ny anarana ho Isahafa ho teny avy amin'Andrianampoinimerina. Izaho manokana dia azo atao hoe mifanakaiky amin'ny marina ity fitantarana ity raha tsy atao hoe izay no tena marina. Ny antony ilazako hoe mifanakaiky amin'ny marina dia noho ny fitantarana ao amin'ny "Tantara ny Andriana" ihany milaza sahady ny fanononana ny anarana hoe Sahafa raha nafindra monina (natao an-tsesitany) ny Tahiamanangoana avy eny Ambohipeno.
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 10:30 PM Aucun commentaire:
Alahamady, fandroana taona 1946
Na dia nafindran'ny fanjakana kolonialista ho 14 jolay isa-taona aza ny fandroana nandritra ny faham-panjaka dia nisy ireo gazety tsy menatra ny maneho hatrany ny andro tena izy amin'izany voalohany alahamady na andro fandroana izany nandritra ny fanjanahantany. Iray amin'izany ny gazety Ny rariny izay nanondro fa ny 27 aogositra 1946 no voalohany alahamady na ny fandroana izay mifanitsy amin'ny fifampirariana soa ho samy tratran'ny arivo taona mitsingeringerina indray. Angamba mbola tsy niorina ny "Trano Koltoraly Malagasy" tamin'izany fotoana izany manitrikitrika fa mifanitsy amin'ny marsa avrily ny taombaovao malagasy.
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 5:20 PM Aucun commentaire:
Maro ireo hevitra mipongatra ary misy ireo ary fitaovana maneho sy mampiely izay arovany fatratra momba ny taombaovao malagasy. Miezaka ny mieli-patrana amin'ny haino vaky jery izy ireny handifotra ireo manana hevitra sy fijery hafa izay manahirana an-dry zareo ny manohitra azy eo amin'ny lafiny ara-tantara. Iray amin'izay tsy zakan-dry zareo ity mpaneho hevitra iray ity satria zanaky ny efa mpitondra tao amin'ny Trano Koltoraly Malagasy tao. Apetraka etoana mba ho mora tadidy sy ho mora karohina rehefa tadiavina. Eris Rabedaoro nasain'i Gascar Fenosoa avy ao amin'ny Real TV
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 10:57 PM Aucun commentaire:
Alahamady sy taombaovao
Nisy fampanantenana tsy mbola tontosa noho ny toe-javatra nitranga. Ity eto ity dia avy amin'ny hevitr'olona iray momba ilay taombaovao fankalaza fahagasy, izany hoe talohan'ny fanjanahantany. Natao indrindra izao ho tahiry satria mora very ny votoaty ao amin'ny media sosialy ao. Tsy maninona na tsy ho liana aza ianao fa natao ho an'izay liana ihany itony.
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 8:43 PM Aucun commentaire:
Mety tsy haharaka loatra ny tian-kolazaina ny tanora mpamaky raha tsy hoe efa lalin-tsaina sy tsara fahalalàna ankapobeny izy. Mety ho hita amin'ireny lanonana ara-panatanjahatena ireny ny fanaovana fehy mainty rehefa maneho fiaraha-miory na fisaonana noho ny voina na fahafatesan'olona maro tamin'ny zava-nitranga iray. Tsy ho nisy nahatsikaritra loatra kosa indray ny fametahana bokotra miloko mainty eo amin'ny akanjo. Marika fisaonana (nampidirin'ny Tandrefana) avokoa anefa ireo efapolo taona mahery izay ary mety ho fanao nandritra ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faharoapolo ihany koa rehefa mijerijery sary na sarimihetsika fahiny.
Manoratra izany aho satria manana reny nodimandry tamin'ny marainan'ny 17 marsa 2022. Efa nanindry mandry ahy ihany io fahafatesan'ny reniko izay efa narary am-bolana maro (mety ho efa an-taonany aza) rehefa nanomboka diso andro sy fitadidiana ny tsingerintaonan'ny vadiko izy tamin'ity taona ity: enina andro mialoha izy dia efa niantso sahady ka tsy maintsy nohazavaina taminy kely izany. Hita soritra tamin'ny endriny ihany anefa ny fahagagana tamin'ny nanaovana ny fanazavana. Efa saika hanome fahatsiarovana sahady ny tsingerintaonako amin'ity volana ity ihany koa izy... tahaka ny hoe tsy ho andriny ny fahatongavan'izany; na zavatra iray koa dia satria tsy ho afa-miara-mifaly tahaka ny fanaony taloha miaraka aminay izy raha tsy hoe izahay mihitsy no hanao fanahy iniana hitsidika azy miaraka amin'ny ankizy hanao fety any an-tranon-dry zareo, izay akaniko ihany fony tokatena.
Fanaony isan-taona ny mitsidika ny zanany na ny zafikeliny nahatratra ny tsingerintaona raha mbola tratran'ny heriny na takatry ny hoenti-manana izany ho fiaraha-mifaly. Raha tsy afaka mandeha kosa izy dia andrasany ny andro maraina hiantsoany anao voalohany. Efa fantapantany ny ora fifohazanao ka amin'iny ora iny i "neny" (zanaka) na i "mummy" (zafikely) no miantso anao. Gaga hatrany ny olona amin'ny tadidiny. Indraindray aza izy irery no niantso na niarahaba ny maraina fa ny maro kosa ny atoandro na ny hariva mihitsy aza vao mety ho mahatadidy.
Fanaony isan-kerinandro na isa-tapabolana ny mitsidika ny zanany sy ny zafikeliny amin'ny andro fantany fa tsy mianatra na tsy miasa ianao. Matetika io fotoana io no andro alarobia na alakamisy raha ho anay. Efa nisy aza ny fotoana dia eny ambavahadin'ny sekoly izy no miandry ny zafikeliny sady mitondra "goûter" ho azy ireo amin'izany. Gaga aho ary nanontany hoe maninona no tsy mankany an-trano dia novaliany hoe na atoandro loatra izy no tafainga ao an-trano na somary reradreraka izy ka tsy hahavita ny dia an-tongotra mankany aminay. Ny fahitana ny zafikeliny ny azy no tena fifaliana ho azy ka somokitra mihitsy izy manao izay hampifaly ihany koa ireo zafikeliny ireo. Tsy mahafa-po azy izany hoe antso an-telefonina izany fotsiny no ifandraisana. Samy faly ery anie izahay nandritra ny fotoana nampamaivay ny COVID-19 ireny mba hoe manao "live" amin'ny Messenger satria ela loatra tsy nifankahita.
Efa am-bolana maro anefa izy izay no tsy afa-nandeha lavidavitra ary tsy tonga taty an-trano intsony tamin'ity taona 2022 ity. Dimampolo metatra eo sisa ny lalana vitany raha lavitra indrindra. Tany amin'ny fiandohan'ny tamin'ny herintaona toy izao anefa izy mbola afa-nandeha taty aminay ihany na dia miantso an-telefonina amin'ny hakana azy môtô na fiarakodia eo Lazaina ho any an-trano sy manatitra azy eo indray rehefa hody. Fotoam-pifaliana avokoa izany rehetra izany.
Tamin'izao faramparany izao kosa, hatramin'ny fotoana tsy nahafahany mitsidika ny zanany sy ny zafikeliny intsony, tsy dia mahavita sasalamba ihany koa izy. Na miezaka aza i Dada ny hamita ny lamba araka izay azony natao dia nahavatra aho no naka ny akanjony hosasana aty aminay. Fomba iray izany ahafahana kosa mitsidika azy indray isan-kerinandro ihany koa.
Somary miantsoro-mianotra kely ny fitantarako. Efa nosoratako etsy ambony fa efa nanindry mandry ahy ny handaozany anay tsy ho ela. Maika aho ny hitondra ny zanakay rehetra indray hitsidika azy mialoha ny hikimpian'ny masony. Tsy niteny io antony io mihitsy na tamin'iza na iza aho fa ny nanesika hitondra ny zaza ihany no nolazaiko. Efa teo am-panatontosana izany mihitsy izahay tamin'ny 8 marsa lasa teo saingy tsy nety velona tampoka ny fiara rehefa teo am-pakana lasantsy teo Andombo Ilafy (Sabotsy Namehana ihany manko no ahafantaran'ny maro ilay toerana) ka rehefa velona taorian'ny nanosehana azy dia ny lalana mody no nasiana fiara sy olona.
Tamin'ny alakamisy maraina teo aho hitondra ny lamba avy nosasana sy nopasohana no niantso i Dada hoe raha mandeha aty ianao (izaho) dia mivonòna hijanona any hatramin'ny hariva fa reraka izy nikarakara an'ineny tontolo andro sy tontolo alina. Efa nilaza aho ny alatsinainy, tsinona, fa ho avy any hitondra ny lamba, sady misy zavatra hafa ho ataoko rahateo any 67ha. Efa hafa dia hafa anefa ny saiko vao nahare ilay antso aho.
Mbola manatitra ny ankizy aho aloha vao mizotra mankany ny dia. Rehefa tonga tany aho tokony ho tamin'ny valo ora sy sasany teo ho eo dia izy efa tsy mihetsika no novantaniko. Tonga aho dia nilaza tamin'i Zandry sy i Dada fa mila ho entina izao dieny izao eny amin'ny fameloman'aina izy. Polyclinique Saint François d'Assise no falehanay sady efa nameloman'aina azy ihany koa tamin'ny volana septambra lasa teo (latsaka ambany dia ambany ny tahan'ny siramaminy). Nantsoina io raha manana fiara mpamonjy aina fa tsy manana sady nilaza izy fa tena feno tanteraka ny sampana fameloman'aina ao amin-dry zareo. Nifampijery izahay ary tsy maintsy HJRA izany no itondrana azy.
Mialoha ny fiantsoana ny vonjy taitra anefa dia mbola izay vao nikenonkenona hisakafo sy hiomana miakanjo i Dada sy i Zandry. Izaho efa tsy mahandry intsony. Miady ny saiko, vao nojeren'ny zandriko manko ny tahan'ny siramamy fa ra efa matsora no azony, nojereny koa ny 'tension' fa Error hatrany no mivoaka. Notsapainay tamin'ny oxymetre fa mipendrapendrana ny 70% fa ny nahatalanjona anay dia mbola nivezivezy teo ihany ny "pulse". Izaho kosa, rehefa izaho irery no teo aminy, notsapaiko ny tongony efa mangatsiaka, ny tanany efa hatsatra. Indro aho fa nivavaka niteny (nitsangana fa tsy nandohalika) naneho fisaorana an'Andriamanitra noho ny nanomezany azy anay, mankasitraka tamin'izay rehetra nataony hatramin'izay nangataka taminy ny handraisana ny fanahiny amin'izay raha izany no sitrapony ary ekeko tanteraka izany sitrapony izany.
Tsy hitantara intsony ny tohin'ity andro ity aho fa ny fantatro dia izao: mba tsy ilazako hoe ny olona rehetra, fa andeha ataoko hoe ny sivifolo isanjaton'ny olona nifandraisany dia manana fahatsiarovana tsara momba azy avokoa. Misy mpanampinay taloha iray izay dia mahavatra hatrany ny miteny hoe veloma any amin'i Mummy rehefa mifanena aminy an-dalana izahay. Tsy miavona izy ary tsotra, tso-piaina sy mandala ny fahamarinana. Izay no voantatarako sady miantraika amiko mivantana momba ny faramparan'ny andro niainany. Azoko fehezina fa tsy nanana alahelo loatra aho tamin'ny fahalasanany satria azoko tsara fa manana zavatra iaretany izy na dia tsy milaza izany na amin'iza na iza aza. Efa roa volana sy tapany sisa ny tsy hahafeno azy ho dimy amby fitolopo taona ka mbola misalasala hoe tsy maintsy ho apetako ihany ve ny bokotra mainty?
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 12:09 AM Aucun commentaire:
Ny lazan'i Bryan gasy...
Buzz na samonomonina tao amin'ny Facebook (sy ny Twitter koa) ilay raharaha nakana live ilay mpampianatra fanatanjahantena nifamalian'ny depioten'Atsimondrano iray momba ilay zanany nalaza tampoka amin'ny anarana Bryan. Niniako ny tsy namoaka izany lahatsary (horonantsary) izany satria ny endrik'ilay mpampianatra no tena naharihary, toy ny hoe atao izay hanalana baraka na hamaizana azy. Niresaka sy saika nitokelaka avokoa anefa ireo naharaka ity toe-javatra iray ity. Santionany fotsiny ireto mivoaka eto ireto fa tsy izy rehetra tsy akory.
Pejin-d RAOTO manontany izay diso amin'ilay mpampianatra sy ilay ray aman-drenin'ny mpianatra.
Radio Mada 100.8 nanoratra hoe lasa malaza ny teny hoe: "Iza(h)o tsy matahotra depiote
Pejy 24hMada namoaka karazana ady rima momba ity raharaha ity:
Pov kosa somary lavitra ny sainy amin'ny hoe raha eto Antananarivo ary misy tranga tahaka izao, dia ahoana ny any amin'ny tsy hita maso any?
Azo lazaina hoe voatery niteny na nanoratra tao amin'ny Facebook ihany koa ny minisitry ny fampianarana izay nahitana sompirana soratra hoe tsy maintsy arovana (ny mpampianatra)
Ilay depiote kosa vao nahasahy manizingizina fa tsy hisy raharaha maloto hahasaringotra azy izany talohan'ity raharaha ity
Izaho kosa namarana eto amin'ny vazivazy fa misy fanodinan-tsaina ihany ity raharaha ity:
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 1:34 PM Aucun commentaire: